ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သည့် အနုပညာပစ္စည်းနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့၊ တင်သွင်းခြင်းကို ပြ? - Yangon Media Group
ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သည့် အနုပညာပစ္စည်းနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့၊ တင်သွင်းခြင်းကို ပြ?
ရန်ကုန်၊ သြဂုတ် ၁၄- ရွှေ၊ လက် ၀တ်ရတနာ၊ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သော အနုပညာပစ္စည်းများ၊ အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများ တင်ပို့၊ တင် သွင်းခြင်းကို စက်တင်ဘာ ၃ ရက် မှစတင်၍ ရန်ကုန်မြို့ ပြည်သူ့ ရင်ပြင်အတွင်းရှိ Myanmar Culture Valley တွင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန မှ သိရသည်။
အဆိုပါ ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်သောအနုပညာ ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များ တင်ပို့၊ တင်သွင်းခြင်းနှင့်ပတ် သက်၍ စိစစ်တန်ဖိုးဖြတ်အဖွဲ့တို့ နှင့်အတူ ဆက်စပ်ဌာနများပါဝင် သည့် One Stop Service Centre ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တင်ပို့တင်သွင်းမည့် ပစ္စည်းများ မှန်ကန်မှုရှိစေရေးနှင့် အခြားမလိုလားအပ်သောကိစ္စရပ် များမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် လေ ဆိပ်တွင် စစ်ဆေးခြင်းများဆောင် ရွက်ရန် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ၀ယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ် ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က “ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရွှေနဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ အနုပညာပစ္စည်းအသုံး အဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ပြည်ပတင် ပို့၊ တင်သွင်းခွင့်ကို ဇန်န၀ါရီနောက် ဆုံးပတ်ကတည်းက ခွင့်ပြုပေးထား ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အခု စက်တင်ဘာ ၃ ရက်မှာ ပြည်သူ့ရင်ပြင်က Myanmar Culture Valley မှ One Stop Service နဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးသွား မှာပါ။ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် လက်ရှိ သက်ဆိုင်ရာအသင်းတွေ ကို ပြင်ဆင်ထားဖို့ ညွှန်ကြားထား တာဖြစ်ပါ တယ်}}ဟု သြဂုတ် ၁၄ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ၀ယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ သယံဇာတထွက်ကုန် ရွှေသတ္တုအား တရားဝင်တင်ပို့ခြင်း ဖြင့် သတ်မှတ်အခွန်အခများရရှိ စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ရွှေ ဈေးကွက်တရားဝင်ဖြစ်ပေါ် လာ စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ တရားဝင်တင်ပို့တင်သွင်းခြင်းဖြင့် တရားမ၀င်ရောင်းဝယ်မှုများ ပ ပျောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ရသင့်ရ ထိုက်သော အခွန်ဘဏ္ဍာငွေ ရရှိ စေရန် ငွေကြေးဈေးကွက်တည်ငြိမ် မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန် နှင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကွက်တွင် မြန်မာ့ရွှေထည်ပစ္စည်းများ ထိုး ဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်စေရန်တို့ အတွက်ရည်ရွယ်၍ ယင်း ရွှေ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ရွှေဖြင့် ပြုလုပ် သော အနုပညာပစ္စည်းများ၊ အသုံး အဆောင်ပစ္စည်းများကို ၂၀၁၈ ခု နှစ် ဇန်န၀ါရီနောက်ဆုံးပတ်တွင် ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ အမိန့်ထုတ်ပြန်တင်ပို့ တင်သွင်း ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျောက် မျက်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း(ရန်ကုန်)၏ တွဲဖက်ဘဏ္ဍာ ရေးမှူး ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ခိုင်က ]]ပြည် တွင်းမှာက မြန်မာပြည်သူပြည် သားအချင်းချင်း လွတ်လွတ်လပ် လပ် ၀ယ်ယူလို့ရနေတယ်။ ဒီလို နေရာကလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေ လာတာကနည်းတယ်။ အများဆုံး ပြည်တွင်းက ကိုယ့်လူမျိုးတွေပဲ လာကြတာများတယ်။ ဆိုင်အများ ကြီး စုစုစည်းစည်းဖွင့်ပေးထားမယ် ဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့။ ဆိုင်နည်း မယ်ဆိုရင်တော့ သိပ်ထူးမယ်မထင် ဘူး။ နိုင်ငံခြားသားအများကြီး လာတဲ့ နေရာတွေမှာလည်း ဒီလို မျိုးက လွယ်လွယ်ကူကူချပြီး ရောင်း လို့ကလည်း အဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အန္တရာယ်ရှိတယ်။ လုံခြုံပြီျးလေန ဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းတာ ပေါ့}}ဟု ပြောသည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာက တက္ကသိုလ်ဘွဲ့လောက် တန်ဖိုး မရှိဆိုသည့် စိတ်ဓာတ်ကိုဖျောက်၊ အသက်မွေ
ရခိုင်အရေးကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချခြင်းထက် ပြဿနာဖြေရှင်းရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးရန် ဘက်မလိုက် အဖွဲ့ဝင
ဒန်နီအဲလ်ဗက်စ်အား ခေါ်ယူရန် မန်စီးတီး ကြိုးပမ်းနေ